1.000 Apple Tarisa Yakapihwa North Carolina University Research | Ndinobva mac
Vakomana vanobva kuCupertino vaita chipo chemawadhi akachenjera e1000 kune Yunivhesiti yeNorth Carolina yeiyo BEGIN chirongwa. Ichi chidzidzo chinomirira (Binge Kudya Egenetics Initiative) uye izvo zvavanoda kuti vawane ndiyo tsananguro yekuwedzeredza muvanhu.
Apple inogara ichifarira kwazvo nyaya dzehutano uye ne iyo Apple Tarisa izvi zvawedzera zvakanyanya. Kupa zvishandiso hachisi chimwe chinhu chatinoona kazhinji paApple, asi zvinoitwa uye mune iyi kesi masayendisiti ari kutora mukana wemawachi kuita zvidzidzo zvavo nevanhu.
Apple Kuona yekutarisisa ndiyo kiyi
Kuva ne data rinogara richiongororwa kubva kumunhu kwakakosha kune vaongorori avo vava kutsvaga vanhu chiuru vezera repamutemo vane ruzivo nezvizvi kusagadzikana kwekudya senge bulimia nervosa. Kune izvi, ivo vakagadzirira imwe nyowani chaiyo kunyorera kuti vawane dhata uye kubatanidzwa kwevanhu ava kunokumbirwa nekuzvipira kwemaminitsi gumi pazuva kuzadza ruzivo rwakakosha kuti uongorore imwe neimwe yematambudziko.
TANGIRA anoedza kunzwisisa kusagadzikana kwekudya senge bulimia, kutsanya, kurovedza muviri zvakawandisa kana kutochenesa. Bulik akaudza vezvenhau kuti vanoda unganidza yakawanda data sezvinobvira kubva kuvanhu ava kuitira kuti ubatsire kuferefetwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 1.000 Apple Watch yakapihwa kuYunivhesiti yeNorth Carolina yekutsvaga